ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ သွေးပျက်ဖွယ်ရာ မြို့ဟောင်းကြီးတွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင်
ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ သွေးပျက်ဖွယ်ရာ မြို့ဟောင်းကြီးများ
23 Feb 2018 . 5:48 PM
မြို့ဆိုတဲ့သဘောက လူနေအိမ်ထူထပ်ပြီးတော့ အသံဗလံပေါင်းစုံနဲ့ သစ်လွင်တောက်ပတဲ့အဆောက်အဦးတွေနဲ့ ပေါင်းစပ်ထားမှသာ ပနံရတဲ့သဘောပါ။ ဒါပေမယ့် တချို့မြို့တွေကျတော့ ကပ်ဆိုက်ပြီး လူတွေစွန့်ခွာသွားကြမယ်ဆိုရင် ခြောက်ခြားဖွယ်ရာအပြည့်နဲ့ မြို့ပျက်ကြီးသဖွယ် ကျန်ရစ်နေတော့မှာပါ။ အသည်းငယ်တဲ့သူအဖို့တော့ ဇာတိမြေကိုစွန့်ခွားသွားရတာပေါ့လေ။ ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာ တစ္ဆေမြို့လို့တောင် တင်စားလို့ရတဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ မြို့ပျက်တွေအကြောင်းကို ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ယူကရိန်းနိုင်ငံ (Ukraine) မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ပရစ်ရက်မြို့ (Pripyat) ဟာလည်း အရင်တုန်းကဆိုရင် လူဦးရေ၅သောင်းနဲ့ စည်ကားခဲ့တဲ့မြို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Chernobyl Nuclear Station ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အခါ အဆိတ်ငွေ့ဖြာထွက်လာတဲ့အတွက် ၁၉၈၆ခုနှစ်မှာ မြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ အခုဆိုရင် ပရစ်ရက်မြို့ဟာ လူနေအိမ်ဟောင်း၊ ကစားကွင်းဟောင်း၊ ဓာတ်ငွေ့မျက်နှာဖုံးတွေပဲရှိပါတော့တယ်။ အခုချိန်မှာတော့ ဓာတ်ငွေ့ဖြာထွက်မှုလျော့ကျသွားပေမယ့် လူတစ်ယောက်မှ မနေတော့ဘဲ ဆေးရုံတွေ၊ စတိုးဆိုင်တွေ၊ အားကစားရုံတွေ၊ ရုပ်ရှင်ရုံတွေနဲ့ ကျောင်းတွေဟာလည်း ခြုံနွယ်ပိတ်ဖုံးလို့နေပါတယ်။
ဟာရှီမာကျွန်း (Hashima Island)
ဂျပန်နိုင်ငံ (Japan) နာဂါဆာကီမြို့ (Nagasaki) နဲ့ ၁၅ကီလိုမီတာ (၉.၃မိုင်) ပဲဝေးတဲ့ မာရှီမာကျွန်း (Hashima Island) ဟာဆိုရင် ရေအောက်မှာ ကျောက်မီးသွေးတွေ တူးဖော်ခဲ့ကြလို့ လူဦးရထူထပ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျောက်မီးသွေးလုပ်သားတွေနဲ့ မိသားစုဝင်တွေ ပေါင်းလိုက်ရင် ၁၉၅၉ခုနှစ်မှာ လူဦးရေ ၅ထောင်အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၆ဝခုနှစ်တွေမှာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျောက်မီးသွေးအစား ဓာတ်ဆီကို အစားထိုးသုံးစွဲလာခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၇၄ ဇန်နဝါရီလမှာ နာမည်ကျော်မော်တော်ကားကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ မစ်ဆူဘီရှိမော်တာ (Mitsubishi Motors) ကလည်း ဟာရှီမာကျွန်းမှာ ကျောက်မီးသွေးတူးတာ ရပ်တန့်ဖို့ တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက် ၁၉၇၄ခုနှစ် ဧပြီလကနေစပြီး ဟာရှီမာကျွန်းမှာ လူတစ်ယောက်မှမရှိတော့ဘဲ အိုဟောင်းနေတဲ့တိုက်တာများသာ ကျန်ပါတော့တယ်။
ရော့စ်ကျွန်း (Ross Island)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ (India) မှာရှိတဲ့ ရော့စ်ကျွန်း (Ross Island) ဟာဆိုရင်လည်း လူနေအဆောက်အဦးတွေကို သစ်ပင်တွေနဲ့ တွယ်ယှက်ပေါက်နေလို့ သရဲမြို့တော်လို့တောင် တင်စားရမလိုဖြစ်နေပါပြီ။ ၁၈၅၇ အိန္ဒိယတော်လှန်ရေးပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဗြိတိသျှအစိုးရဟာ ရော့စ်ကျွန်းကို ရာဇဝတ်သားတွေပဲ သီးခြားထိန်းသိမ်းခဲ့သလို မျက်နှာဖြူတွေလည်း နေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ရော့စ်ကျွန်းမှာ ကဇာတ်ရုံ၊ ကလပ်၊ ရေကူးကန်၊ ဥယျာဉ်ခြံတွေနဲ့ ၁၉၄၁ခုနှစ်အထိ လှပနေခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၄၁ခုနှစ်မှာ မြေငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရုံမက ဂျပန်နိုင်ငံလည်း ကျူးကျော်ခဲ့လို့ လူအများအပြား ရော့စ်ကျွန်းကို စွန့်ခွာပြေးခဲ့ရပါတယ်။ ရော့စ်ကျွန်းကို ဂျပန်-အိန္ဒိယ တစ်လှည့်စီပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရာမှ ၁၉၇၉ရောက်မှသာ အိန္ဒိယရေတပ်ဖွဲ့က ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
နမ်မီးဘီးယားနိုင်ငံ (Namibia) တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ကိုမန်စကော့မြို့ (Kolmanskop) ဟာ ၁၉ဝဝခုနှစ် အစောပိုင်းကာလတွေတုန်းက စည်ကားခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉ဝ၈ခုနှစ်မှာ ဂျာမန်လူမျိုးတွေက ကိုမန်စကော့မြို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ စိန်ထွက်တယ်လို့ ယုံကြည်တဲ့အတွက် သူတို့နဲ့အတူ ဗိသုကာပညာရှင်တွေ အလုပ်သမားတွေကို ခေါ်လာခဲ့တဲ့အတွက် လူဦးရေထူထပ်စည်ကားခဲ့ပါတယ်။ သဲကန္တာရတွေပြည့်နေတဲ့ တောင်အာဖရိကတိုက်ဖြစ်ပေမယ့် ကိုမန်စကော့မြို့ကတော့ လှပလွန်းတဲ့ခန်းမတွေ အားကစားရုံတွေ ကျောင်းတွေ ဆေးရုံတွေနဲ့ ပြည့်စုံနေခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၃ဝခုနှစ်တွေမှာ စိန်အထွက်နည်းသွားခဲ့ပြီး ကိုမန်စကော့မြို့နဲ့ ၂၇ဝကီလိုမီတာ (၁၆၇.၇၇မိုင်) ကွာဝေးတဲ့ လိမ္မော်မြစ် (Orange River) အနီး ကမ်းရိုးတန်းမှာ စိန်ထွက်တယ်လို့ သတင်းကြီးရာကနေ ကိုမန်စကော့မြို့ကို စွန့်ခွာခဲ့ကြရာကနေ ၁၉၅၄ခုနှစ်မှာ လူတစ်ယောက်မှ မရှိတော့ဘဲ မြို့ပျက်ကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
အီတလီနိုင်ငံ (Italy) မှာရှိတဲ့ ခရာကိုမြို့ (Craco) ကိုတော့ ၈ရာစုကတည်းက တည်ဆောက်ထားတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့ဟောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မြေပြင်အထက် ၁၃၁၂ပေအမြင့် ကျောက်ကမ်းပါးထိပ်မှာ တည်ဆောက်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၆၃ခုနှစ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ မြေပြိုမှု၊ ၁၉၇၂ခုနှစ်မှာ ရေကြီးမှုနဲ့ ၁၉၈ဝခုနှစ်မှာ ငလျင်လှုပ်ခတ်မှုစတဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကြောင့်သာ လူတွေက စွန့်ခွာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာတော့ အိုဟောင်းနေတဲ့ မြို့ပျက်ကြီးတစ်ခုလို ကျန်နေပြီး Virgin Mary ရုပ်တုကို ခရာကိုမြို့မှာ မပျက်စီးသေဘဲ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ လူမနေတော့တဲ့အတွက် ရုပ်ရှင်သမားတွေအကြိုက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး “The Passion of The Christ” ဇာတ်ကားဟာ ခရာကိုမြို့မှာ ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ . . . ဒါတွေကတော့ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာရှိတဲ့ လူမနေတဲ့မြို့တွေကို ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာရော စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့မြို့တွေ ရှိသေးရဲ့လား။ ဘာဖြစ်လို့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာလဲဆိုတာ Comment မှာ ရေးသွားပါဦးနော်။
ကမ်ဘာတဈလှားမှ သှေးပကျြဖှယျရာ မွို့ဟောငျးကွီးမြား
မွို့ဆိုတဲ့သဘောက လူနအေိမျထူထပျပွီးတော့ အသံဗလံပေါငျးစုံနဲ့ သဈလှငျတောကျပတဲ့အဆောကျအဦးတှနေဲ့ ပေါငျးစပျထားမှသာ ပနံရတဲ့သဘောပါ။ ဒါပမေယျ့ တခြို့မွို့တှကေတြော့ ကပျဆိုကျပွီး လူတှစှေနျ့ခှာသှားကွမယျဆိုရငျ ခွောကျခွားဖှယျရာအပွညျ့နဲ့ မွို့ပကျြကွီးသဖှယျ ကနျြရဈနတေော့မှာပါ။ အသညျးငယျတဲ့သူအဖို့တော့ ဇာတိမွကေိုစှနျ့ခှားသှားရတာပေါ့လေ။ ကမ်ဘာတဈလှားမှာ တစ်ဆမွေို့လို့တောငျ တငျစားလို့ရတဲ့ ခွောကျခွားဖှယျရာ မွို့ပကျြတှအေကွောငျးကို ဗဟုသုတဖွဈဖှယျ ဖျောပွလိုကျပါတယျ။
ယူကရိနျးနိုငျငံ (Ukraine) မွောကျပိုငျးမှာရှိတဲ့ ပရဈရကျမွို့ (Pripyat) ဟာလညျး အရငျတုနျးကဆိုရငျ လူဦးရေ၅သောငျးနဲ့ စညျကားခဲ့တဲ့မွို့တဈခုဖွဈပါတယျ။ Chernobyl Nuclear Station ပေါကျကှဲခဲ့တဲ့အခါ အဆိတျငှဖွေ့ာထှကျလာတဲ့အတှကျ ၁၉၈၆ခုနှဈမှာ မွို့ကိုစှနျ့ခှာခဲ့ရပါတယျ။ အခုဆိုရငျ ပရဈရကျမွို့ဟာ လူနအေိမျဟောငျး၊ ကစားကှငျးဟောငျး၊ ဓာတျငှမေ့ကျြနှာဖုံးတှပေဲရှိပါတော့တယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ ဓာတျငှဖွေ့ာထှကျမှုလြော့ကသြှားပမေယျ့ လူတဈယောကျမှ မနတေော့ဘဲ ဆေးရုံတှေ၊ စတိုးဆိုငျတှေ၊ အားကစားရုံတှေ၊ ရုပျရှငျရုံတှနေဲ့ ကြောငျးတှဟောလညျး ခွုံနှယျပိတျဖုံးလို့နပေါတယျ။
ဟာရှီမာကြှနျး (Hashima Island)
ဂပြနျနိုငျငံ (Japan) နာဂါဆာကီမွို့ (Nagasaki) နဲ့ ၁၅ကီလိုမီတာ (၉.၃မိုငျ) ပဲဝေးတဲ့ မာရှီမာကြှနျး (Hashima Island) ဟာဆိုရငျ ရအေောကျမှာ ကြောကျမီးသှေးတှေ တူးဖျောခဲ့ကွလို့ လူဦးရထူထပျခဲ့တဲ့ ကြှနျးပဲဖွဈပါတယျ။ ကြောကျမီးသှေးလုပျသားတှနေဲ့ မိသားစုဝငျတှေ ပေါငျးလိုကျရငျ ၁၉၅၉ခုနှဈမှာ လူဦးရေ ၅ထောငျအထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၆ဝခုနှဈတှမှော ဂပြနျနိုငျငံမှာ ကြောကျမီးသှေးအစား ဓာတျဆီကို အစားထိုးသုံးစှဲလာခဲ့ပါတယျ။ ၁၉၇၄ ဇနျနဝါရီလမှာ နာမညျကြျောမျောတျောကားကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ မဈဆူဘီရှိမျောတာ (Mitsubishi Motors) ကလညျး ဟာရှီမာကြှနျးမှာ ကြောကျမီးသှေးတူးတာ ရပျတနျ့ဖို့ တရားဝငျထုတျပွနျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီနောကျ ၁၉၇၄ခုနှဈ ဧပွီလကနစေပွီး ဟာရှီမာကြှနျးမှာ လူတဈယောကျမှမရှိတော့ဘဲ အိုဟောငျးနတေဲ့တိုကျတာမြားသာ ကနျြပါတော့တယျ။
ရော့ဈကြှနျး (Ross Island)
အိန်ဒိယနိုငျငံ (India) မှာရှိတဲ့ ရော့ဈကြှနျး (Ross Island) ဟာဆိုရငျလညျး လူနအေဆောကျအဦးတှကေို သဈပငျတှနေဲ့ တှယျယှကျပေါကျနလေို့ သရဲမွို့တျောလို့တောငျ တငျစားရမလိုဖွဈနပေါပွီ။ ၁၈၅၇ အိန်ဒိယတျောလှနျရေးပွီးတဲ့အခြိနျမှာ ဗွိတိသြှအစိုးရဟာ ရော့ဈကြှနျးကို ရာဇဝတျသားတှပေဲ သီးခွားထိနျးသိမျးခဲ့သလို မကျြနှာဖွူတှလေညျး နထေိုငျခဲ့ပါတယျ။ ရော့ဈကြှနျးမှာ ကဇာတျရုံ၊ ကလပျ၊ ရကေူးကနျ၊ ဥယြာဉျခွံတှနေဲ့ ၁၉၄၁ခုနှဈအထိ လှပနခေဲ့ပါတယျ။ ၁၉၄၁ခုနှဈမှာ မွငေလငျြလှုပျခတျခဲ့ရုံမက ဂပြနျနိုငျငံလညျး ကြူးကြျောခဲ့လို့ လူအမြားအပွား ရော့ဈကြှနျးကို စှနျ့ခှာပွေးခဲ့ရပါတယျ။ ရော့ဈကြှနျးကို ဂပြနျ-အိန်ဒိယ တဈလှညျ့စီပိုငျဆိုငျခဲ့ရာမှ ၁၉၇၉ရောကျမှသာ အိန်ဒိယရတေပျဖှဲ့က ပိုငျဆိုငျခဲ့ရပါတယျ။
နမျမီးဘီးယားနိုငျငံ (Namibia) တောငျပိုငျးမှာရှိတဲ့ ကိုမနျစကော့မွို့ (Kolmanskop) ဟာ ၁၉ဝဝခုနှဈ အစောပိုငျးကာလတှတေုနျးက စညျကားခဲ့တဲ့မွို့ဖွဈပါတယျ။ ၁၉ဝ၈ခုနှဈမှာ ဂြာမနျလူမြိုးတှကေ ကိုမနျစကော့မွို့ပတျဝနျးကငျြမှာ စိနျထှကျတယျလို့ ယုံကွညျတဲ့အတှကျ သူတို့နဲ့အတူ ဗိသုကာပညာရှငျတှေ အလုပျသမားတှကေို ချေါလာခဲ့တဲ့အတှကျ လူဦးရထေူထပျစညျကားခဲ့ပါတယျ။ သဲကန်တာရတှပွေညျ့နတေဲ့ တောငျအာဖရိကတိုကျဖွဈပမေယျ့ ကိုမနျစကော့မွို့ကတော့ လှပလှနျးတဲ့ခနျးမတှေ အားကစားရုံတှေ ကြောငျးတှေ ဆေးရုံတှနေဲ့ ပွညျ့စုံနခေဲ့ပါတယျ။ ၁၉၃ဝခုနှဈတှမှော စိနျအထှကျနညျးသှားခဲ့ပွီး ကိုမနျစကော့မွို့နဲ့ ၂၇ဝကီလိုမီတာ (၁၆၇.၇၇မိုငျ) ကှာဝေးတဲ့ လိမ်မျောမွဈ (Orange River) အနီး ကမျးရိုးတနျးမှာ စိနျထှကျတယျလို့ သတငျးကွီးရာကနေ ကိုမနျစကော့မွို့ကို စှနျ့ခှာခဲ့ကွရာကနေ ၁၉၅၄ခုနှဈမှာ လူတဈယောကျမှ မရှိတော့ဘဲ မွို့ပကျြကွီးဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အီတလီနိုငျငံ (Italy) မှာရှိတဲ့ ခရာကိုမွို့ (Craco) ကိုတော့ ၈ရာစုကတညျးက တညျဆောကျထားတဲ့ တောငျပျေါမွို့ဟောငျးတဈခုဖွဈပါတယျ။ မွပွေငျအထကျ ၁၃၁၂ပအေမွငျ့ ကြောကျကမျးပါးထိပျမှာ တညျဆောကျထားတဲ့မွို့ဖွဈပါတယျ။ ၁၉၆၃ခုနှဈမှာ ဖွဈပှားခဲ့တဲ့ မွပွေိုမှု၊ ၁၉၇၂ခုနှဈမှာ ရကွေီးမှုနဲ့ ၁၉၈ဝခုနှဈမှာ ငလငျြလှုပျခတျမှုစတဲ့ သဘာဝဘေးအန်တရာယျတှကွေောငျ့သာ လူတှကေ စှနျ့ခှာခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အခုခြိနျမှာတော့ အိုဟောငျးနတေဲ့ မွို့ပကျြကွီးတဈခုလို ကနျြနပွေီး Virgin Mary ရုပျတုကို ခရာကိုမွို့မှာ မပကျြစီးသဘေဲ လလေ့ာနိုငျပါတယျ။ လူမနတေော့တဲ့အတှကျ ရုပျရှငျသမားတှအေကွိုကျဖွဈခဲ့ပွီး “The Passion of The Christ” ဇာတျကားဟာ ခရာကိုမွို့မှာ ရိုကျကူးခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ကဲ . . . ဒါတှကေတော့ ကမ်ဘာအရပျရပျမှာရှိတဲ့ လူမနတေဲ့မွို့တှကေို ဖျောပွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မွနျမာနိုငျငံမှာရော စိတျဝငျစားစရာကောငျးတဲ့မွို့တှေ ရှိသေးရဲ့လား။ ဘာဖွဈလို့ စိတျဝငျစားစရာကောငျးတာလဲဆိုတာ Comment မှာ ရေးသှားပါဦးနျော။